Muuna Iyo Nolol silica. | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Muuna Iyo Nolol silica.
Waa engeg aan la mahadin. Waana meel bus iyo habaas leh. Muuni, waa inan 22 jira oo afar carruura daadahaysanaysa. Basaasidda iyo muuqaal xumida ka muuqata waxaa u dheer jidh go’ iyo darxumo maskaxeed. Waxay la noolayd qoys hodana, oo ka koobnaa hooyo, aabbe, labaa wiil iyo iyada. Waxay dhigan jirtay dugsiga sare gaar ahaan fasalka labaad muddo ku siman shan sano ka hor. Waxay iska heleen oo is jeclaadeen Baaruud oo ahaa macangag jacayl. Waxaa uu ahaa maal qabeen. Waxaa jeebkiisa ku jiray hanti aan yarayn oo uu dhaxal u helay, waayo waa madi oo aabihii keligiibuu rag ka wafaaday.
Beer laxawsi sasabaysan oo joogta ah ayuu ku waday Muuna oo ahayd fariid, xaariifad, waalid muddeecad ah. Waxay ku hammiyeysay nolol horumarsan oo ay ku anfacdo dhamman shacabka ay la nooshahay. Manay ku hammiyi jirin inay hesho lacag iyo nin toona. Balse, Baaruud wuxuu geed gaaban iyo geed dheer ba u fuulay inuu hantiyo maanka iyo jidhkan quruxda badan hammigeeduna sarreeyo ee Muuna. Wuxuu qarash badan ku bixiyey soo xero gelinta halyeyad u guntatay taakulaynta danyarta, kobcinta aqoonteeda, waxbaridda jiilka ka hooseeya ee aan awoodin inay kharashka wax barashada iska gudaan.
Baaruud, waxa uu la aqal galay Muuna oo dhallinyaro ah, qurux badan oo bilicsan. Muddo ku simman 5 sanno waxay u yeelatay 4 carruura. Baaruudna muddadaa wuxuu ku jiray tumasho, tegidda baararka, booqashada meelaha khamriga lagu gado. Afar sano ka dib Baaaruud wuu musallafay, aakhirkiina waxaa haleelay cudurka Kanserka iyo HIV AIDs. Waana la oofsaday. Muuni waxay wayday nolol fiican oo ay kula noolayd qoyskeedii. Immikana waxay daadahaysanaysa afar ubada oo duuf miidhana dhaqaale ku filan aan haysan. Quruxdeedii, hammigeedii iyo horumarkii ay higsanaysay waxaa lumiyey hantiile rabay ku raaxaysiga jidhyar oo curdina. Intay wada joogeen noloshoodu waxay ku dhisnayd hiif, hanjabaad iyo nolol silica. Waxaanay ka dheeftay nolol cidhiidhiya.
Qore: saddam osman kaabash.